China XY-3540 Metal Facade Cladding fanamboarana sy orinasa | Shuolong
XY-3540- vy tariby harato toy ny vy dia azo ampiasaina ho fiarovana anatiny sy ivelany, na inona na inona ny vy harato azo ampiasaina ho an'ny anatiny sy ivelany tohatra tohatra, izay afaka manampy haingon-trano amin'ny toerana tsy very ny fampiasana asany. Ny isan-jaton'ny faritra malalaka misokatra amin'ny harato vy dia mitazona ny hevitra misokatra ho an'ny toerana feno hazavana.
Material: Stainless vy
Savaivony savaivony: 4mm
Lanja: 8.65kg / ㎡
Toerana misokatra: 66,8%
Hatevin'ny hatezerana: 8.9mm
Max Sakany: 4m
Max Halavany: 36m
Ny harato metaly dia azo ampiasaina ho fizarazarana amin'ny rindrina, rindrina ridao, sns amin'ny endrika anatiny na ivelany. Ny harato vy dia ampiasaina ho toy ny arofanina, izay manampy safidy amin'ny endrika fiarovana ny tohatra anatiny sy ivelany. Ny fampiasana harato vy ho fiarovana fiarovana dia afaka mitana andraikitra haingon-trano nefa tsy very ny asan'ny fiarovana. SHUOLONG metaly metaly dia afaka manome endrika mety indrindra amin'ny tetikasanao.
Inona koa, raha mila mampiditra singa famolavolana vy amin'ny tetik'asa misy anao na ho avy ianao dia mifandraisa anay azafady. Ho fanampin'ny vokatra avo lenta sy ny vidiny tsara indrindra, afaka manome ihany koa izahay
serivisy namboarina sy vahaolana fametrahana ho an'ny Programanao.
1) Ny pcs tsirairay avy amin'ny fonosana amin'ny taratasy, 1-5 pcs anaty boaty hazo;
1.40 Taona niainana: 40 taona mahery ny traikefa famokarana harato tariby.
2.Qual Garantee: Ny baiko tsirairay dia voasedra sy voafehy tsara arakaraka ny fenitra avo kokoa noho ny sehatra iraisam-pirenena.
3.Instalasiôna sy kojakoja: Afaka manome vahaolana sy kojakoja ilaina harato ho anao izahay
Raha te-hanafatra na te hahalala antsipiriany bebe kokoa momba ny harato vy izahay, dia raiso amin'ny tranokalanay ny hafatrao, antsoy izahay na andefaso ny zavatra takianay amin'ny mailaka anay, dia hamaly anao ao anatin'ny 24 ora!
Previous: XY-3821 Metal Weave Mesh ho an'ny fiarovana Staffety
Manaraka: XY-3150 haingon-trano vy haingon-trano ho an'ny famoronana ao anaty trano fisakafoanana
Harato metaly maritrano
Lamba metaly metaly
Metal harato Facade
XY-M3631 lamba metaly vy varahina
XY-A1615 Fisarahana lamba vita amin'ny vy
XY-R-2042R Copper harato ao anaty vera
XY-1593 Kofehy vita amin'ny tenona boribory
XY-M4528 Architectural Mesh ho an'ny rindrin'ny ambainy
XY-R-11SS Stainless Steel Haingon-trano haingon-trano